Ny majika dia ho avy amin'ny fisoratana anarana mialoha an'i Harry Potter: Wizards Unite | Androidsis
Niantic dia efa namoaka ny pejin'ny vokatra ho an'i Harry Potter: Wizards Unite ao amin'ny Google Play Store. Ny lohateniny zava-misy vaovao nampitombina izay tiany hahatonga antsika rehetra ho mpanao majia mba hidina an-dalambe, toy ny nataontsika tamin'ireny volana voalohany ireny rehefa nilatsaka i Pokémon Go.
Mandritra ity taona ity no hisy ny titre Niantic vaovao nalaina mivantana avy amin'ny tontolo Harry Potter lmankanesa any amin'ny finday. Ny tontolon'ny majika iray manontolo avy amin'izao rehetra izao noforonin'i JK Rowling dia ho hita amin'ny findaintsika ho iray amin'ny fahatongavana manandanja indrindra amin'ity taona ity.
Miorina amin'ny zava-misy mitombo, ary farany, ao amin'ny Harry Potter: Wizards Unite dia horaisinay ny andraikitry ny mpikarama vaovao an'ny Vondron'asa miasa amin'ny statut of the Secret izay tsy maintsy manadihady sy mitahiry ny «Calamity».
Ny tanjona manokana dia mamerina zavatra an-jatony amin'ny toerana niaviany ho hitantsika miparitaka eraky ny faritra manodidina antsika, ny arabe ary ny tanànantsika. Tsy hoe hanana ity iraka ity fotsiny isika fa afaka miady amin'ireo mpanao majia hafa mba hihaika azy ireo ary hahafantatra amin'ny toerana anaovantsika ny fahaizantsika.
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia miresaka isika Multiplayer ady amin'ny fotoana tena izy ary manohitra ny karazana fahavalo rehetra ahafahantsika manasongadina ireo Dementors sy Death Eater. Eo no hidiran'ny ady fiaraha-miasa mba hiarahanay amin'ireo mpiara-miasa amintsika ary hifalifaly amin'ny zava-misy nampitomboina natolotr'i Harry Potter: Wizards Unite.
Amin'izao fotoana izao tsy fantatray ny daty namoahana an'i Harry Potter: Wizards Unite, saingy efa afaka misoratra anarana amin'ilay rohy izay ho hitanao etsy ambany izahay, na eo aza ny tsy ho antomotra ny daty ka ny findaintsika dia saika lasa tongasoa majika hahafahantsika mandray mpiasa sy miaina ao amin'ny tontolon'ny majikan'i Harry Potter .
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Azonao atao izao ny misoratra anarana amin'i Harry Potter: Wizards Unite ary miomana amin'ny zava-misy mihabe
PUBG Mobile beta izao dia misy amin'ny kinova 0.11.5 miaraka amina basy, fiara ary maro hafa